चलचित्र ‘शत्रु गते’ को टिजर हलमा रिलिज – Medianp
चलचित्र ‘शत्रु गते’ को टिजर हलमा रिलिज
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २८, २०७४१२:१३0
काठमाडौँ । चलचित्र ‘शत्रु गते’ को टिजर रिलिज भएको छ। फिल्म युनिट मिलेर टिजरलाई हलमा सार्वजनीक गरेका हुन्। चलचित्रका दुई गीत रुपै मोहोनी र पिरतीको बर्कोले यु ट्युबलाई राम्रै तताउदै गर्दा चलचित्र टिमले टिजर सार्वजनिक गरेको छ । टिजरलाई यु ट्युबमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कृ’ हेर्ने दर्शकलाई ‘शत्रु गते’ को टिजर उपहार हुने भएको छ । डेब्यु फिल्म ‘जात्रा’ निर्देशक प्रदिप भट्टराईको निर्देशनमा तयार भएको यसफिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ , हरिवंश आचार्य , दीपक राज गिरी , दीपाश्री निरौला , किरण केसी , शिवहरी पौडेल , बशुन्धरा भुसाल , रमेश रंजन झा, प्रियंका कार्की , पल शाह , आँचल शर्मा लगायतको अभिनय रहेको छ ।
मह सञ्चारको ब्यनारमा निर्माण गरिएको चलचित्रमा किरण केसीले लगानी गरेका छन् . चलचित्रमा हरिवंश आचार्यको कथा रहेको छ । यसमा छायाँकन दिर्घ गुरुङको रहेको छ भने सम्पादन मित्र गुरुङले गरेका हुन् । यसमा दीपकराज गिरी , दीपाश्री निरौला , नरेन्द्र कंसाकार , शिवहरी पौडेल , यसोधा श्रेष्ठ र रमिला आचार्य निर्माता रहेका छन् । चलचित्र चैत्र ९ गते प्रदर्शन हुनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुद्धीकरणको माग के गरेको थिएँ, मलाई अपराधी र हत्यारा भनियो
रणवीरले गरे गर्लफ्रेन्डसँग बराबरी ! ‘पद्मावत’ पछि बढाए पारिश्रमिक